पार्टी एकतामा एमालेको भर ! – TajaNepal
Home /Blog/पार्टी एकतामा एमालेको भर !
कार्यदलको ढिलाइले बढायो शङ्का
काठमाडौँ । कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएकै दिन मे २२ अर्थात् वैशाख ९ गते नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका बीचमा पार्टी एकता हुन्छ ? समानता नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम मिलेका दलहरूका बीचमा हुने पार्टी एकताले दीर्घकालसम्म निरन्तरता पाउँछ । नेकपा एमाले सैद्धान्तिक रूपमा विचलित छ, पार्टीको नीतिगत धारणा मौकापरस्त छ । अजय माक्र्सवादी दर्शनप्रति त्यसको गुन्जायस छैन । सरकारमा नेतृत्व लिँदैमा सबैथोक हुँदैन । समृद्ध नेपाल, सुखी जनता विकास योजनाको सफलता जस्ता कार्यक्रम संसदीय व्यवस्थाका अङ्ग हुन् । नेपाली काँग्रेस उदारता र आर्थिक समानता जस्ता कुरा गर्छ तर व्यवहारमा उसले कार्यान्वयन गर्दैन । त्यही कारण काँग्रेसका योजना असफल भए । वाम गठबन्धनका योजनामा जनता जुटे ।
समानता सबैमा हुनुपर्छ भन्ने माओवादी र हामी ठूला हौँ भन्ने एमालेको अहङ्कार हटेको छैन । पार्टी एकता नै किन गर्नुप¥यो, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनिहाल्यो, एमाले अध्यक्ष खड्ग ओली प्रधानमन्त्री भइहाले । ५ वर्षका लागि कसैले हल्लाउन सक्दैन भन्ने अहङ्कार एमालेका एकताविरोधीहरूको छ । त्यही कारण माधव नेपालको कार्यदल र रामबहादुर थापाको कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न ढिलाइ गरेका त होइनन् ? शङ्का यही कार्यदलको ढिलाइले उब्जाएको हो । एकताबाट फर्कन दुवै पार्टीलाई सहज छैन । पार्टी एकताको पूर्वतयारीसँगै चुनावमा होमिँदा एमालेले २५ र माओवादीले १५ सिट बढी पत्यक्ष निर्वाचनमा प्राप्त गरेका थिए । एकताकै कारण वाम गठबन्धनको ४० सिट बढी प्राप्त हुँदा नेपाली काँग्रेस २३ सिटमा खुम्चियो भन्ने मूल्याङ्कन दुवै पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले गरेको छ । माओवादीलाई पेलेर र हेपेर एकता हुँदैन । एमालेको पेलाइ स्वीकार्नै पर्ने अवस्था पनि छैन । साङ्गठानिक रूपमा एमाले जहाँ छ, माओवादी त्यहाँ छ । सङ्गठन माओवादीको ठूलो हुन्थ्यो, चार टुक्रा अझै छ । व्यक्तिको पार्टी परित्यागले जो–कोहीमा असर नगर्ला तर माओवादीलाई कमजोर बनाउन डा. बाबुराम सफल भए । मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दको विभाजनले प्रभाव पारेकै हो । नेता मातेका कारण माओवादीप्रतिको जनलहर घट्यो । एउटै सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम भएका सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशितालाई एजेन्डाको रूपमा ल्याउने माओवादीबीचमा विभाजन बढी खाने र कम खानेमै सीमित छ ।
माओवादीका एजेन्डा विश्व जनमतले स्वीकारेपछिका दिनमा कार्यकर्ताको दबाबले एमाले र काँग्रेसले स्वीकार गरेका हुन् । वास्तविकतालाई छोप्न सकिँदैन । हत्केलाले सूर्य छेकिँदैन भने जस्तै हो । माओवादी केही होइन, जे छ हाम्रो एमालेकै छ भन्नु एकताविरोधी भ्रम हो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विश्वले हेरेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चीनमा एकछत्र छ । विश्वका शक्तिशाली देशहरूलाई चुनौती बनेको चीनको विकास र उत्तर कोरियाले आफ्नो सार्वभौमिकता र राट्रिय अखण्डतालाई उच्च राख्दै साम्राज्यवादका विरुद्ध लिएको अठोट पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई शिक्षा हुनुपर्ने हो । तर पनि एकतामा शङ्का छ ।
एमालेका पूर्वकार्यकर्ता देखिँदैनन् । अगाडि देखिएका नेताको पहुँचसम्म पुगेका अञ्चल, जिल्ला र क्षेत्रका नेता–कार्यकर्ता आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाइसकेको एमालेले पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएको माओवादीलाई समानताका आधारमा एकता गर्दा के फरक पर्छ ? यो प्रश्न एमालेका नेताहरूलाई गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले अबको ५ वर्ष विकास र समृद्धिको वर्ष भएको बताउनुको पछाडि कम्युनिस्ट पार्टीको एकता नै हो । एमालेकै हातमा छ, अबको एकता सफल बनाउने कुरा पनि । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल दुई नेताको समानताको आधार नै दुई पार्टीको एकता मापदण्ड भएको बताउँँछन् । स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धि नै नयाँ वर्षको योजना बनेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । यो मौका चुक्यो भने फेरि अवसर आउँदैन । अहङ्कार र दम्भले एकताको हित गर्दैन । योजनाविहीन कुरामा समृद्धि र विकास सम्भव छैन । अहिले पार्टी एकता पहिलो लक्ष्य हो । कम्युनिस्ट एकताले सार्वभौम अखण्डता, आत्मगौरव र राष्ट्रिय स्वाभिमानको योजना सफल बनाउँछ । पद र नेतृत्वको भागबण्डा महत्वपूर्ण होइन । कार्ययोजनाले नेता जन्माउँछ, आन्दोलनले कार्यकर्ता गोलबन्द बनाउँछ । सफल कामले कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाउँछ । एमालेले वैचारिक धरातल छाड्यो, विचार छाड्यो, विकासको नाममा कार्यकर्तालाई आर्थिक सम्पन्नतातर्फ धकेल्यो, त्यो सत्य हो । नेतृत्वमा रहेका एकाध नेताबाहेक अधिकांश आर्थिक रूपमा बलिया छन् । नेताका छोराछोरी बेरोजगार छैनन् तर माओवादीका सबै नेता सबैतिर दखल छैनन् । एमाले र माओवादीको भिन्नता यही हो । त्यही कारण एकतामा एमाले लचिलो हुनुपर्दछ ।